IBraking for Ikhefu lokuhlambela - Ubuchwephesha
IBraking for Ikhefu lokuhlambela
Kukho umboniso kwisizini yesine ye Ukhula apho umlinganiswa kaMary-Louise Parker uNancy abambeke kwitrafikhi ewela umda kwindlela eya eMexico. Emva kokuphunga i-Starbucks Venti iced latte yakhe ehlala ikhona kangangeeyure, uyayophula, asuse umphezulu kwikomityi engenanto aze akrobe kuyo. Umntwana omncinci okhwele kwimoto engummelwane umjongile. Ngumntu, umzuzu ohambelanayo; kwaye, ngendlela kaNancy ekhohlakeleyo-kodwa-ehlekisayo, iyinto enomtsalane.
Ayisiyiyo kanye indlela evakalelwa ngayo kubaqhubi abakhwelwayo, uninzi lwabo olunokuthi lubotshelelwe ezimotweni zabo ngaphandle kokukhululeka.
Kutshanje, umlingane wam u-Allison P. Davis waba neyakhe ingqayi ye-Uber yomchamo. Wayesele eza kuphuma kuhambo olubi ngokungaqhelekanga lwe-Uber Pool oluquka inkukhu eqhotsiweyo kunye nengxabano yesitulo esingasemva, xa umtya webhegi wakhe wakrazuka kwinto ephantsi kwesitulo sakhe. Wathi xa eyitsala, kwaphuma ingqayi yaza yachitheka. Ndathi, ‘Owu uxolo! Ndibethe eyakho...’ ndayeka ukuthetha njengoko wayeqonda ukuba yintoni, ejongana emehlweni nomqhubi. Bobabini babesazi. Abathetha nto omnye komnye. Waluvala ucango wemka kumgangatho we-passenger omanzi te.
Ekuqaleni, oku kuvakala njengento ehlekisayo, ukuba ibali eliguqula isisu. Akunjalo - kuyadambisa kwaye kutyhila. Iimeko ezinzulu zokusebenza kwemarike yokwabelana nge-ridesharing - kunye noqoqosho lokwabelana ngokubanzi - zidla ngokulibaleka, ngelixa imiba malunga nokhuseleko lwabathengi kunye nexabiso libamba iintloko.
Abaqhubi beCab, ngokuqinisekileyo, bajongene nomba wekhefu lokuhlambela iminyaka. Kwaye kule nyanga nje, ingxelo ye-BBC yafumanisa ukuba Abaqhubi bokuhanjiswa kwe-Amazon bayachama kwaye bazikhuphe ngaphakathi kweeveni zabo zokuhambisa ukuze bahambisane nemfuno emandla. Iiyure ngeeyure emotweni, nokuba yintoni na umsebenzi, ayihambisani nekhefu lokuhlambela. Umahluko, nangona kunjalo, sisikhalazo esiqhelekileyo sabaqhubi benkonzo abafunwayo: ngokusemthethweni abanakwenza nto ngayo. Abaqhubi beemoto kunye nabaqhubi belori banemibutho kwaye bathathwa njengabaqeshwa bokwenene hayi iikontraki ezizimeleyo. Olu khuseleko lubanika amaxesha ekhefu agunyazisiweyo, ubunewunewu abangabafumaniyo abaqhubi bezoqoqosho.
Iikomidi ezifanelekileyo zezikolo eziphakamileyo
UberPeople.net yeyona forum yabaqhubi be-Uber enkulu engekho semthethweni. Ngaphandle kwegama layo, iforum eneneni luluntu lwabaqhubi abakhwela kwiLyft, Postmates, TaskRabbit, njalo njalo. Izaliswe ziindaba, amabali, iingcebiso, ukugxeka, kunye nemiyalezo eyakhayo. Ubukhulu becala, yindawo yokuba abaqhubi banxibelelane ngayo nantoni na abadibana nayo. Ukukhangela okukhawulezayo kubonisa ukuba uninzi lwabo luye lwadibana nomcimbi we-pee jar.
Ndandingumqhubi osisigxina. Akunjalo, omnye wabasebenzisi beforum abahamba ngesiphatho uJollyrodger undixelela. Ndiqaphele kwangethuba ukuba njengomqhubi kufuneka ulengeze ixesha lakho. Bendimosha ixesha lam ngokuma kwindawo ngeendawo kwasekuqaleni, kwaye ixesha lakho liyatyiwa. Ukuba uqhuba, yithi, kane ngemini kwindawo yokubeka i-pitstop kwiiyure ezisixhenxe zokuqhuba, yongeza iimayile ezongezelelweyo kunye nexesha elongezelelweyo. Iiyure ezisixhenxe ziba zisibhozo, utsho.
Emva koko kukho ingxaki yokulibala ukuhamba ... kwaye [nohambo] olude olongezelelweyo? Umkhweli uhlawulela uhambo - kwaye naziphi na iindawo zokumisa endleleni [...] Ifana nomqhubi ongaqhunyiswanga gesi, imeko efanayo. Umkhweli uba nomsindo nangomzuzu owongezelelweyo kwidayimane kunye nexesha labo. I-intanethi igcwele iingcebiso ezivela kwabanye abaqhubi kwiingqayi zepee kunye neendawo ( iikomityi ze-Starbucks ezingenanto kuNancy Botwin, Gatorade iibhotile, iibhotile zamanzi ezivaliweyo , ngokukhululekileyo ngaphandle komnyango , phantsi iigrayiti zogutyulo ).
Yingxoxo edumileyo ngokuyinxenye kuba ukuchama kukawonke-wonke litikiti elinzima - kwiimeko ezimbi kakhulu, kunokubangela ukuba abenzi bobubi banyanzelwe ukuba babhalise njengabaphuli-mthetho ngokwesondo. Kwaye izindlu zangasese ezisetyenziselwa uluntu kunokuba nzima ukuzifumana, ngakumbi ngeeyure zasemva kwexesha. Kodwa esona sizathu sicinezelayo sokuba kutheni abaqhubi beshiya ikhefu lokuhlambela kukuhlala endleleni kwaye baqhube.
Iphephancwadi lika-Uber, Umfutho , ipapashwe uhlelo kunyaka ophelileyo ukucebisa abaqhubi ukuba baqinisekise ukuba bamanzi kwaye bagxininisa ukubaluleka kokumisa imigodi; U-Uber ucebisa iihotele, iivenkile zekofu, amathala eencwadi, iipaki, izikhululo zepetroli, iivenkile ezinkulu, kunye neembiza. Kodwa ngelixa inkampani ingakwazi cebisa ezi zinto, nazo zinika inkuthazo ezininzi ukwenza ngokuchasene ngqo: Abaqhubi amandla bavuzwa kakhulu. Ekuqaleni kwalo nyaka , Uber uqinisekisiwe abaqhubi abangene ngaphezu kweeyure ze-60 ngeveki i-$ 2,000 ngelo xesha. Izinto ezifana nokwamkela iipesenti ezingama-90 zezicelo zokukhwela kunye nokugqiba iidrive ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwixesha elinikiweyo kunokukhokelela iibhonasi . I-Lyft inemigaqo-nkqubo efanayo , apho okukhona uqhuba kakhulu, kokukhona iLyft iya kusikwa incinci.
hamba kanzima dewey cox
UHarry Campbell wayengumqhubi we-Uber kunye noLyft ngoku oqhuba iblogi ebizwa ngokuba I-Rideshare Guy. Ndimbuzile ukuba kukho nto ayaziyo malunga nokwanda kweejagi ze-Uber kunye neLyft zepee kwaye kutheni kukho ingxaki enjalo yokufumana ixesha lekhefu lokuhlambela. Abanye abaqhubi banazo kodwa abavuleleki kakhulu ngayo ngenxa yezizathu ezicacileyo, utshilo uCampbell. Kukho imiba eqinisekileyo, nangona kunjalo, ngokubhekiselele kwiimfuno zomzimba zokuqhuba, kuba awukwazi ukuphuma ngokulula emotweni kwiiyure ezi-8-12 ngexesha.
UCampbell wandidibanisa ne into ayibhale kuFacebook - uhlobo lokuqhula malunga nesindululo sokungabinandawo yokuchama ngelixa uqhuba - oko kwanika iimpendulo ezininzi. Andizange ndihambe ekhaya ndingenayo ibhotile yam, lol, umntu omnye wabhala. Ayizukanga kodwa iyasebenza. Ibhotile yeGatorade! watsho omnye. Abanye banika iingcebiso ngeendawo ezilungileyo zokumisa kunye nokuchama - Ithagethi, amakhonkco egrosari. Nokuba yeyiphi na indlela, kucacile ukuba impembelelo yokuqhubeka uqhuba nokuba yeyiphi na into ebaluleke kakhulu kwi-rideshare yexesha elizeleyo okanye abaqhubi bokuhanjiswa koontanga.
Ayikokugxininisa ngokungqongqo kweenkampani ekuqhubeni kangangoko kunokwenzeka, nangona kunjalo. Kukwakho nemeko yengqondo phakathi kwabaqhubi. URand Larson, oqhubela i-Uber neLyft ikakhulu kwindawo yasePalm Springs, uthi abaqhubi bayakhuthazwa ukuba bathathe ikhefu xa kuyimfuneko, kwaye baphume xa besenza njalo. Kodwa ivakala njengenkonzo yomlomo. Kukho into engaphantsi kwengqondo eqhubekayo, utshilo uLarson. Ukuba ndingaphuma ndiyochama, ndingaphoswa yindlela entle yokukhwela. Ixesha elithathayo ukufumana igumbi lokuhlambela kwaye ulisebenzise libaluleke kakhulu. Kunzima ukuphuma kuyo nantoni na, nakwimisebenzi esisiseko yabantu.
ULarson wandixelela ngexesha awayengayinanzi imisebenzi esisiseko yabantu. Uhambo olude oluya ekonsathini lwaba lude xa ebetha itrafikhi - umkhweli ekugqibeleni wagqiba ekubeni aphume ahambe imayile yokugqibela kuba babehleli ixesha elide. ULarson kwafuneka achame, kwaye wayengenandlela yimbi ngaphandle kokusebenzisa ibhotile yamanzi engenanto ... eyaphela ingekho nkulu ngokwaneleyo ukubamba imixholo. Ndiye ndaphuphuma kweso situlo sam, emva koko ndaziphalala xa ndizama ukuvala isiciko, utsho. Bendizihlalele ndedwa ichama, ihempe yam ichithekile, ndaphinda ndaxinga kwi traffic enye imizuzu eyi 30. Kwaye kwakuyinjikalanga eshushu.
ULarson waqaphela ukuba amazinga otyando ayeyi-x10 - ngoko ke endaweni yokuba agoduke, waya kwiThagethi ekufutshane ukuze athenge iimpahla zokutshintsha nokucoca. Kodwa njengoko wayengena kwindawo yokumisa iimoto, ngaphambi kokuba aphume nokuphuma emotweni, wafumana isicelo sokumkhwelisa. Wayithatha.
Xa ndiphakamisa umfana, ndabona ukuba imoto yam ivumba njengegumbi lomfana oneminyaka eyi-8 ubudala, utsho. Ivumba elibi lomchamo. Ndincame ndavula i-sunroof yam waze wabulela. Ndenza ngathi akukho nto iphosakeleyo, kwaye mhlawumbi akazange aqaphele. Phakathi kokukhwela ukuya ekonsathini kunye nelandelayo, wenza i-250 yeedola. Ndagqibela sele ndineqhakuva lediaper. Uyabona ukuba kutheni kunzima ukuphuma ukuchama. Ndiza kuhlala kwi-pee yam nge-250 yeedola.
Umbono wokuhlala kumchamo wakho unzima ngokwaneleyo, kodwa kukho nombuzo wokhuseleko. Ukukhwela ebusuku okanye kwiindawo eziyinkangala, abaqhubi banenkxalabo malunga nokumisa kwi-mini-mart engalunganga okanye ukuhamba emva kwe-dumpster kwi-alley emnyama . Abaninzi babo bacebisa ukusebenzisa SitOrSquat , ekunceda ukuba ufumane indawo yangasese ecocekileyo, yasimahla kwindawo yakho. Oku ngokucacileyo kunzima kwiindawo ezikude kakhulu, nangona kunjalo. (Kwaye, kufuneka ihambe ngaphandle kokutsho, konke oku kunzima kakhulu kubaqhubi basetyhini.)
Kunyaka ophelile, Umkomishinala wezabasebenzi waseCalifornia walawula ukuba abaqhubi baka-Uber bebengabasebenzi hayi iikontraki, kodwa u-Uber uye wasibhena eso sigqibo kwaye ityala lisaqhuba. Kubekho ezinye ezimbalwa amanyathelo asemthethweni kwicala lokutshintsha abaqhubi be-ridesharing kubasebenzi, kodwa akukho nto isemthethweni isekiweyo, ke okwangoku, izinto zihlala zifana. Kwiphepha elivela kwiZiko loPhando kuMsebenzi kunye neNgqesho e-UCLA enesihloko Imiba Isonjululwe Kodwa Ayikasonjululwa: Ukungahlelwa kakuhle kwabasebenzi kwiCandelo leRideshare , umbhali uPamela Izvanario ubhala athi:
U-Izvanariu uhlabela mgama echaza ukuba ukuba abaqhubi babonwa njengabasebenzi, baya kuba nokhuseleko olufana nokubuyiselwa kweendleko ezinxulumene nomsebenzi, imbuyekezo yabasebenzi, kunye, phakathi kwezinye izinto, ukutya kunye nekhefu lokuphumla. Ngelishwa, oku akunjalo. Ngaphantsi kwe-OSHA umgangatho wama-29 CFR 1910.141(c)(l)(i) , abaqeshi bafanele balungiselele izindlu zangasese ezinokusetyenziswa xa [abasebenzi] befuna ukwenjenjalo. Akukho mithetho malunga nokuba abasebenzi banokuyisebenzisa kangaphi indawo yokuhlambela, ngoko ke umthetho uthi: Abaqeshi kufuneka babonelele ngezindlu zangasese kwaye abasebenzi banokuzisebenzisa rhoqo njengoko kufuneka. Ngokunjalo kufuneka abaqhubi abakhweliswayo bahlelwe ngokutsha, ayikuphela nje ukuba i-Uber, iLyft, kunye nezinye iinkampani kufuneka zinikeze ngokusemthethweni ikhefu, kuya kufuneka zibonelele ngendawo ebonakalayo enamagumbi okuhlambela.
Njengoko imile, i-Uber, iLyft, kunye nezinye iinkampani zinako cebisa abasebenzi babo abaqeshwe ngemvumelwano bathatha ikhefu ukuze bazolule kwaye batye kwaye bahambe kwaye ewe, bechama, kodwa akufuneki ukuba bazenze. Ndicinga ukuba njengoko iinkampani ezifunwa kakhulu zitshintshela kwinzuzo, zijonge ukunciphisa iindleko zazo kwaye zicuthe umsebenzi ongakumbi kubaqhubi bazo, utshilo uCampbell. Kwaye njengoko umvuzo uhla, abaqhubi kufuneka basebenze ngakumbi kwaye bahambe ngakumbi ngexesha elifanayo ukuze bafumane imali eyaneleyo yokuqhuba. Okubuhlungu kukuba, ikhefu lokuhlambela yenye yezo zinto abaqeshi abangazithatheli ngqalelo kuba zibonakala zincinci, kodwa xa uqhuba i-traffic yeeyure ezikhawulezayo kwaye kufuneka ufumane indawo enegumbi lokuhlambela elifanelekileyo kunye nendawo yokuhlambela. Ipaki, enokukubiza ixesha elixabisekileyo apho ubunokuthi ngenye indlela uhambise kwaye wenze imali okanye udibane nezabelo.
Ukufumana iibhotile ezizaliswe ngumchamo ecaleni kwendlela sisithethe esibekekileyo eMelika . Kodwa oku kukhuseleka kwabaqhubi akuthethi ukuba ukugcina ingqayi ye-pee emotweni yakho uze uyikhuphe esitratweni yinto engacocekanga kwaye iyacekiseka. Nangona kunjalo, eyona nto iphumayo kufuneka yoyiswe yinto yomntu: inkonzo yabathengi ibisoloko idimaza, kwaye imodeli yoqoqosho ephuhlayo ekhuthaza abasebenzi ukuba babe kwimfuno kangangoko inokuthi iyenze ibe mandundu.
isidima moir moulin rouge
Uluhlu lweefilimu ezijijekileyo
ive i-5 kuyo
Amabakala ayilwayo e-nfl 2017
Indoda yentsimbi erhuqwayo 3
Ingoma yengoma yenduli